यी हुन् नाम सुन्दानै दुश्मनहरु काँप्ने विश्वका १० फाइटर विमानहरु, अत्याधुनिक यी फाइटरहरु कुन – कुन देशसंग छ ? जान्नुहोस (फोटो सहित) « Sajha Page
यी हुन् नाम सुन्दानै दुश्मनहरु काँप्ने विश्वका १० फाइटर विमानहरु, अत्याधुनिक यी फाइटरहरु कुन – कुन देशसंग छ ? जान्नुहोस (फोटो सहित)
साथमा यो विमानले २५ मिटरको जमिनमा पनि ल्याण्ड गर्न सक्षम छ । यो अन्य फाइटर विमानहरु भन्दा सस्तो पनि छ ।
(अनुवादकर्ता–सरद राईः विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा)